Izibane zendlela ziya kulawula ukufikelela eSt.Mark Square ukusuka ngo-2018 | Iindaba Zokuhamba
Izibane zendlela ziya kulawula ukufikelela eSt.Mark Square ukusuka ngo-2018
Maria | | Italia, Izaziso
Ngokuqinisekileyo iSt.Mark's Square, ngokuqinisekileyo, luphawu lwembali lweVenice. Nyaka ngamnye bamalunga nezigidi ezingama-40 abantu abatyelela esixekweni. Ukuhamba ngamandla kwabantu abaninzi baseVenetians kuya kuba neziphumo ezibi kwizikhumbuzo zesixeko. Ngesi sizathu, urhulumente wasekhaya wagqiba kwiinyanga ezidlulileyo ukulawula ukufikelela kwesi sikwere sihle ngo-2018 ngokwamkela iindlela ezahlukeneyo.
Eyokuqala yazo ibonakala ngathi kukufakwa kwezibane zilawula ukufikelela eSan Marcos Square. Injongo yeBhunga lesiXeko ayikokuvala ipaseji eya kwisikwere sodumo kodwa kukuqinisekisa ukhuseleko lwabakhenkethi kunye nabemi besixeko.
1 Athini la manyathelo?
2 Kutheni kwenziwe esi sigqibo?
3 Yintoni iPlaza de San Marcos?
Athini la manyathelo?
Amanyathelo amanye iya kuba kukuseka ixesha lokufikelela ePlaza de San Marcos, umzekelo ukusukela ngentsimbi yeshumi kusasa. ngo-10pm, yenza ukubhuka kwangaphambili ukungena kwisikwere okanye uvale indawo kumaxesha oxakekileyo, anje ngeempelaveki kunye neenyanga zikaJulayi nezika-Agasti.
Okwangoku kucwangcisiwe ukuqala ngokufakwa kwezibane zendlela kunye nokufunda ukuba lisebenza njani na eli nyathelo. Xa isikwere sigcwele ngabakhenkethi, kuza kubakho isibane esibomvu kwaye ezinye iindwendwe kuya kufuneka zilinde de ukukhanya kube luhlaza, nto leyo eza kubonisa ukuba isikwere sikhutshiwe. Ukubalwa kwabantu kuyakwenziwa ngeekhamera zevidiyo ezifakwe kwisikwere kwaye inkqubo yekhompyuter iya kuxela ngexesha lokwenyani ukuba bangaphi abantu abangaphakathi.
IBhunga lesiXeko saseVenice lizimisele ukuqokelela idatha kwangoko kwaye liyisebenzise nge-intanethi ukuze abakhenkethi bakwazi ukujonga inani labantu abasikwere. Eli nyathelo aliyi kuchaphazela abahlali okanye abasebenzi bendawo njengoko baya kuba nekhadi labo eliza kuqhuba ukuhamba.
Lo mgaqo mtsha uya kuncedisa kwirhafu yabakhenkethi esetyenziselwa ukutyelela iVenice kwaye iyahluka ngokuxhomekeka kwixesha lonyaka, indawo ekuyo ihotele kunye nodidi lwayo. Umzekelo, kwisiqithi saseVenice, i-euro enye ngenkwenkwezi nganye ihlawuliswa ngexesha elifanelekileyo.
Kutheni kwenziwe esi sigqibo?
Uyilo lwemimiselo emitsha luza emva kokuba i-Unesco ivakalise i-alam malunga nokonakala kweVenice, ebibambe isihloko seLifa leMveli yeHlabathi ukusukela ngo-1987.
Kwelinye icala, iVenice iyatshona kancinci kancinci kwaye inyani yokuba izigidi kunye nezigidi zabakhenkethi zidlula kwizitrato zayo yonke imihla, mhlawumbi ingaphezulu kwendawo endala njengoko kunokuthwala oku. Kwelinye icala, abahlali kudala beqhankqalaza ngokuchasene nokucinga ukuba kukuhlasela kwabakhenkethi, abathi maxa wambi isimilo sabo singabi nantlonelo nanjengoko kukho abo bahlamba eCanal Grande okanye bangcole isixeko besinika umfanekiso ombi ngaso.
Ngapha koko, ngoJulayi ophelileyo abanye babahlali abangama-2.500 XNUMX babonisa kwiziko lembali betyhafile koko bakugqala njengokudelela isixeko sabo. Ngale ndlela babefuna ukutsala ingqalelo ye-UNESCO kunye neBhunga lesiXeko ukuthintela iVenice ekubeni yindawo enomtsalane kubakhenkethi endaweni yokuba ibe sisixeko esihlalayo. Kwaye yonke imihla iVenice inabakhenkethi abaninzi kunye nabemi abambalwa. Njengomdla, ngo-2017 kukho kuphela abemi abangama-55.000 xa kuthelekiswa ne-137.150 kwii-60s zakuqala.
Yintoni iPlaza de San Marcos?
ISt.Mark's Square yintliziyo yaseVenice kwaye yenye yezona ndawo zibalaseleyo ehlabathini. Ime kwelinye icala leGrand Canal kwaye kuyo sinokubona izikhumbuzo ezahlukeneyo kunye neendawo ezinomdla kwimbali nenkcubeko ezinje ngeNdlu yaseDoge, iBell Tower okanye iBasilica, enye yeetempile ezifotwe kakhulu emhlabeni.
Ukusukela kwimvelaphi yayo, iSan Marcos Square ibiyindawo ebaluleke kakhulu kunye neqhinga lesixeko. Ayisiyiyo eyokujonga kwezopolitiko kuphela (kuba yayiyilwe kwaye yakhiwa njengokwandiswa kweNdlu yaseDoge) kodwa nakwinkcubeko ukusukela kwimisebenzi emininzi enje ngeemarike, umngcelele, imiboniso yeqonga okanye imikhosi yomkhosi eyayibanjelwe apho.
Kulapho ke apho amakhulu amahobe azulazula ngokukhululekileyo. Baqhelene nobukho bomntu kangangokuba ngekhe kumangalise ukuba beza kuwe bacele ukutya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Iindawo ezibalekayo eYurophu » Italia » Izibane zendlela ziya kulawula ukufikelela eSt.Mark Square ukusuka ngo-2018
I-Kanazawa, kunye nomtsalane wexesha eliphakathi laseJapan
Ukuhamba ngeSorolla House-Museum eMadrid